Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay badbaadinta hantida Qaranka “Dhageyso+Sawirro” – Radio Muqdisho
Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay badbaadinta hantida Qaranka “Dhageyso+Sawirro”
in Tartanka Ramadaan, Wararka, Wararka Raadiyahaa
Barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka ayaa looga hadlay badbaadinta hantida Qaranka dalka.
Barnaamijka ayaa waxaa marti ku ahaa Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir iyo hanta dhowrka Qaranka Dr. Nuur Faarax, iyo Garyaqaan Dr. Cusmaan.
Mas’uuliyiinta ayaa si faah faahsan uga hadashay sida loo badbaadinkaro hantida Qaranka, iyagoo ku taliyay in tira koob lagu sameeyo hantida guud ee Qaranka.
Sidoo kale mas’uuliyiinta ayaa si qota dheer uga jawaabay su’aalo ay soo weydiiyeen qaar ka mid ah dhageystayaasha barnaamijka oo ku kala sugnaa dalka iyo dibadda.
Halkan hoose ka dhageyso barnaamijka oo dhameystiran